Ady amin'ny ady any Azeroth | Ady ho an'i Azeroth, Warlocks, Vaovao | WoW Guides | WoW Guides
Ady amin'ny ady any Azeroth
Aloha! Izahay dia mitondra anao ny fanovana talenta, fahaiza-manao ary talenta fanomezam-boninahitra omen'ny Affliction Warlock ao amin'ny Battle for Azeroth amin'ny Battle for Azeroth.
1 Ady amin'ny ady any Azeroth
famamihinana- Ny fijaliana, ny kolikoly, ny fijaliana tsy marin-toerana, ny voan'ny kolikoly, ary ny fanahin'ny tatatra dia miteraka fahasimbana 50% bebe kokoa amin'ireo lasibatra ambanin'ny fahasalamana 35%. Ny fahasimbana atrehana dia avo kokoa noho ny fihenan'ny fahasalaman'ny lasibatra.
fampidiran-dra-manana-hery: Ny Life Tap dia mampitombo ny fahavoazana nataonao 10% nandritra ny 20 seg.
fidradradradrana: Mamoaka fidradradradrana mampivarahontsana ka mahatonga ny fahavalo 0 ao anatin'ny 10 metatra handositra ny horohoro ary manjary tsy misaina mandritra ny 20 seg. Ny fahasimbana dia afaka manafoana ny vokany.
fijinjana-panahy: Ampitomboina 20% ny fahasimban'ny biby fiompy sy ny biby fiompy. Maharitra 12 seg, nitombo 4 seg isaky ny lasibatra voakasiky ny Fangirifirianao, hatramin'ny 36 sec farafaharatsiny.
Grimoire of Synergy: Miantso demonia faharoa hiady ho anao mandritra ny 25 taona, miatrika fahasimbana 100% bebe kokoa. Manana cooldown 1,5 min. Rehefa voaantso izy dia hampiasa avy hatrany ny iray amin'ireo fahaizany manokana ny demonia:
Grimoire: Imp: Esory ny ody majika manimba izay manohina anao.
Grimoire: Deep Pit: Maneso ny kendreny.
Grimoire: Succubus: Sintomy ny lasibatra nataony.
Grimoire: Felhunter: Manapaka ny tanjony.
areti-mifindra: Manome fahasimbana 15% bebe kokoa amin'ireo tanjona tratran'ny fijalianao tsy milamina.
zioga-malefic: Mandritra ny famindrana ny fanahin-dra, ny fahavoazanao noho ny vokan'ny fotoana dia miteraka fahasimbana 25% bebe kokoa amin'ilay kendrena.
fahatezerana aloka: Mampandeha ny fahavalo rehetra ao anatin'ny 8 metatra mandritra ny 3 seg.
fahantrana-maizina: Atsofohy amin'ny fahorian'ny fahavalo lavo ny fanahinao, mampitombo ny hafainganao 30% mandritra ny 20 seg.
ratsy fanahy: Miantso amam-baravarana amin'ny toerana kendrena izay mifampiraharaha (100% ny herin'ny tsipelina) p. Ny fahasimban'ny Shadowflame amin'ireo fahavalo rehetra ao anatin'ny 10 metatra dia mampijaly azy ireo amin'ny fahoriana sy fijaliana tsy milamina.
fahafatesana mandady: Ny fijalianao, ny kolikoly, ny fijaliana tsy milamina dia miatrika ny fahasimbana 15% haingana kokoa.
deathbolt: Mamelà tadim-pahafatesana amin'ny kendrena, mitondrà 40% amin'ny fahasimbana sisa tavela amin'ny vokadratsin'ny fotoana maharitra amin'ny tanjona.
fifamihinana aloka: Shadow Bolt dia mampihatra ny Shadow Embrace, mampitombo ny fahavoazana nataonao ho an'ny tanjona 3% mandritra ny 10 seg. Miorina hatramin'ny in-3 izy.
famamihinana: Nifindra tamin'ny sampana 100 ka hatramin'ny 30. Ny fijaliana, ny kolikoly, ny fijaliana tsy marin-toerana, ny voan'ny fahalotoana, ny maha-irery an'i phantom ary ny fanahy maloto 50%40% fahasimbana bebe kokoa amin'ireo tanjona kendrena ambanin'ny 35% ny fahasalamana. Ny fahasimbana atrehana dia avo kokoa noho ny fihenan'ny fahasalaman'ny tanjona.
mihozongozona: Nifindra tamin'ny sampana 15 ka hatramin'ny 30. Ny fahasimbana ataon'ny agony dia afaka manampy 15 stacks ankehitriny.
kolikoly tanteraka: Maharitra izao ny kolikoly ary mifampiraharaha a 25%15% fahasimbana bebe kokoa. Nihena ho 24 segondra ny faharetan'ny mpilalao.
grimoire-fahafoizan-tena: Soraty ny demoniao hahazoana ny Herin'ny demonia, izay ahazoanao ny fahaizany mifehy demonia. Inona koa mahatonga ny famosavianao indraindray koa (75%35% ny herin'ny tsipelina) p. bonus Simba ny aloka kendrena ary fahavalo hafa ao anatin'ny tariby 8m. Maharitra adiny 1 na mandra-piantsoanao demonia.
ny: 5%2% base mana. 2515 sek hampiasa indray. Fanahy matoatoa manana ny kendrena, mampiditra (500%55% ny herin'ny tsipelina) p. Simba ny aloka ary mitombo 15%10% ny fahavoazana nataonao nandritra 1015 seg. Raha maty ny kendrena dia tafaverina ny cooldown an'i Haunt.
singularity-phantom: Mametraka singularity phantom amin'ny tanjona izay mandany ny ain'ny fahavalo rehetra ao anatin'ny 15 metatra, mifampiraharaha [8 * (180%25% ny herin'ny tsipelina)] p. manimba mihoatra ny 16 seg ary manasitrana anao 20%25% fahasimbana nosedraina.
minono-fiainana: Mitsentsitra ny votoatin'ny ain'ny kendrena, manimba azy ireo. manimba mihoatra ny 15 seg ary manasitrana anao 60%30% fahasimbana nosedraina.
mamafy-voa: Ny voan'ny kolikoly dia mampiditra voa iray amin'ny demonia 21 Fahavalo hafa eo akaiky eo.
manaikitra aloka: Manaikitra ny fahavalo, mandratra 1. Simba ny aloka.
fanaintainana: 3%1% base mana. Mahatonga ny fijaliana mihombo amin'ny kendrena, hatrany amin'ny [(31.86%7.2% ny herin'ny tsipelina) * 6] p. Ny fahasimban'ny aloka mihoatra ny 18 seg. Manomboka ambany ny fahasimbana ary mihombo tsikelikely. Rebooting Agony dia mitazona ny haavon'ny fahasimbana ankehitriny. Indraindray ny fahavoazana mahazo aina dia miteraka 1 Soul Shard.
KOLIKOLY: 3%1% base mana. Manimba ny tanjona sy ny fifanarahana (226.8%63% ny herin'ny tsipelina) p. Simba ny aloka mihoatra ny 14 seg.
drain-fanahy: Mandrotsaka ny fanahin'ny lasibatra, mampiditra 6. Ny fahasimban'ny aloka mihoatra ny 6 seg ary mamerina ny fahasalamana mitovy amin'ny 200%125% fahasimbana nosedraina. Miteraka Shard Soul 1 raha maty mandritra izany ny tanjona.
voa-kolikoly: Mampiditra voa demonia ho any amin'ny lasibatry ny fahavalo izay mipoaka aorian'ny 1812 seg, inona no manimba (172%50% ny herin'ny tsipelina) p. Ny fahasimban'ny aloka amin'ireo fahavalo rehetra ao anatin'ny 10 metatra dia mihatra aminy ny kolikoly. Nipoapoaka aloha ny voa raha nisy detonations hafa namely ilay lasibatra na raha nahazo ilay tanjona (Spell power * 30050 / 100) p. fahasimbana avy amin'ny ozanao.
fivoahan'ny aloka: 6%2% base mana. Mandefa volley aloky ny fahavalo, miatrika (160%50% ny herin'ny tsipelina) p. Simba ny aloka.
fahoriana tsy milamina: Manimba ny kendrena (370.8%64% ny herin'ny tsipelina) p. Simba ny aloka mihoatra ny 8 seg. Misy ny azo atao ny mampihatra fampiasana hatramin'ny 5 ny Fijaliana tsy miorina amin'ny fotoana iray amin'ny tanjona kendrena. Raha esorina, mandrosoa [(92.7%16% ny herin'ny tsipelina) * 400/100] p. fahasimban'izay nanala azy ary nangina nandritra ny 4 seg. Miatrika fahasimbana 10% bebe kokoa amin'ireo lasibatra voakasiky ny fijalianao tsy milamina ianao. Miverina 1 Soul Shard raha maty mandritra ny faharetan'ny vokatra ny tanjona.
lo sy lo: Isaky ny mandeha rano ianao fanahyfiainana Manimba fahasimbana, mampitombo ny faharetan'ny fijalianao tsy maharitra, ny kolikoly ary ny fanaintainanao mandritra ny 1 s.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » About us » Ady amin'ny ady any Azeroth
Mpisorona masina amin'ny ady ho an'i Azerota